एक नम्बर प्रदेशका भिआईपी महिलाहरूको तीज, मन पराउँदैनन् तडक-भडक
एक नम्बर प्रदेशसभाका भिआइपी महिलाहरु तीजमा निक्कै व्यस्त हुन्छन् । प्राय: तीज आउनु अगाडिदेखि नै उनीहरु महिला दिदीबहिनीहरुले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । तीजको दिन पनि उनीहरु कुनै न कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याउँछन् । कोही माइत जान्छन् र घरपरिवारसँग रमाइलो गर्छन् । अनि कोही चाँही संघसंगठन र आफ्ना मतदाताहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्। माननीय महिलाहरुले कसरी मनाउँदैछन् यसपालीको तीज ? कोशी अनलाइनका लागि यज्ञ अधिकारीको रिर्पोट…..
कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन्छु
सरस्वती पोखरेल, उपसभामुख, एक नम्बर प्रदेशसभा
घरमा तीज मनाउने चलन छैन । माइत पनि गइँदैन । महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रममा तीज आउनु अगाडिदेखि नै सहभागी हुन्छु र तीजको दिन पनि निम्तो आएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर प्रगतिशील ढंगले मनाउँछु । तीजलाई महिला अधिकारसँग जोड्नका लागि आग्रह गर्छु । हुँदा खाने र हुने खानेहरुको विभेद तीजमा कायम हुनुहुन्न ।
सावित्रिकुमारी रेग्मी (सांसद)- चाडपर्व संरक्षण गर्ने हिसाबले मनाउँछु
तीज हाम्रो सांस्कृति चाड हो । नेपाली महिला दिदीबहिनीले मनाउने महान चाडमा तीज पर्छ । हामी तीजलाई परम्परागत रुपमै मनाउँदै आएका छौँ । तीजलाई तडकभडक गरेर मनाउनेभन्दा पनि शुभकामना आदानप्रदान भेटघाटको रूपमा मनाउने गरेको छु । तीज पर्व जाति विषेशमा मात्र सीमित रहेको छैन । अहिले सबैले तीज मनाउने गरेका छन् । तिजलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर विभिन्न संघ संस्थाले पनि मनाउने गरेका छन् । यसलाई चाडपर्व सरक्षण गर्ने हिसाबले मनाउँदै छु ।
जसमाया गजमेर (सांसद)– तीजको नाममा तडक–भडक गर्ने कार्यक्रममा जान्न
तीज महिला सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित रहेर गरेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको छु । बृद्ध आश्रममा रहेको आमाबुवा एक्लो महसूस नहुने गरी महिला दिदीबहिनीले आयोजना गरेको तीज कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । त्यसैगरी तीजकै अवसरमा गाँउका निम्न आर्थिक अवस्था भएका आमा दिदीबहिनीलाई कपडा वितरण गयौँ । यस्तै कार्यक्रम गरेर तीज मनाइरहेका छौँ । तीजको नाममा तडकभडक गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएको छैन । त्यस्तो कार्यक्रममा बोलाए पनि जाँदिन । अहिलेसम्म सहमागी भएको कार्यक्रम सबै तडकभडकरहित छन् । हामीले तीजलाई आवाज बुलन्द गर्ने पर्वको रूपमा विकास गर्नु पर्ने छ । तीजको अवसरमा शुभकामना आदान–प्रदान गरेर मनाइरहेका छौँ ।
विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे (सांसद) – भड्किलो तीजको बिरोध गर्छु
म जनजाति समुदायको भएपनि समाजमा तीज मनाउँछु । तीज तडकभडकले हैन साँस्कृतिको जगेर्ना र महिला अधिकारका लागि मनाउनु पर्छ । म भड्किलो तीजको पक्षमा छैन ।
यसोदा अधिकारी (सांसद) – तीजको महत्वको विषयमा छलफल अगाडी बढाएर मनाउँछु
तीज हाम्रो पुरानो संस्कारसँग जोडिएको चाड हो । तीजको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले भड्किलो तरिकाले तीज मनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्छ । तीजको बहानामा ठूला होटलहरुमा भड्किला कार्यक्रम हुने गरेका छन् । यस्ता भड्किला कार्यक्रमले कमजोर मानसिकताको विकास गराउँछ । तीजको महत्त्वको विषयमा छलफल अगाडी बढाएर मनाउँदै छौँ । यस पर्वलाई रचनात्मक तरिकाले मनाउँदै छौँ । अबको आवश्यकता भनेको पुराना कुरालाई परिवर्तन गर्दै समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्छ ।
अम्बिका थापा (सांसद) – तडकभडक गरेर मनाएको तीजले समाजमा राम्रो सन्देश दिँदैन
हिजोका दिदीबहिनीले दुःखले मनाउने गरेको तीजमा परिवर्तन आएको छ । यसपाली मात्र होइन पहिलेदेखिनै तीज शुभकामना आदानप्रदान, भोकै नबस्न सचेत गराउँदै मनाउँदै आएका छौँ । तीजका कुसंस्कारमा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमा सहभागी भएर सचेत गराउने काम गरिरहेको छु । तडकभडक गरेर मनाएको तीजले समाजमा राम्रो सन्देश दिन सक्दैन । तीजको बहानामा गरगहना प्रदर्शन नगर्न पनि मेरो आग्रह छ । हिजोदेखि मनाउँदै आएको चाड मनाउनु पर्छ तर यसलाई सन्देशमुलक बनाएर प्रदेशभरि फैलाउनु उत्तिकै जरुरी छ । हरितालीका तीजको अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
सीता थेवे (सांसद ) –साथीहरुले बोलाएको ठाउँमा गएर मनाउने
तीज परम्परागत चाड हो । म पाँचथरबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । यसपटक पाँचथर जान पाइँन । संसद चलिरहेको छ । गत वर्ष पनि जान पाएको थिइन । तीज मनाउन साथिहरुले बोलाएको ठाउँमा गएर मनाउने हो । तीजमा सृजनात्मक कार्य गरेर मनाउने छु । महंगा गरगहना लगाएर तडकभडक गरेर तीज मनाउने चलन बढेर गएको छ । महिना दिनदेखि तारे होटलमा तीज मनाउनेको कमी छैन । तीजमा हुने गरेको तडकभडक रोक्नुपर्ने समय भएको छ । यसले समाजमा विकृति बढाउँदै लागेको छ । तीजलाई परम्परागत रूपमा साधारण तरिकाले मनाउने कुरालाई फैलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
उमिता विश्वकर्मा (सांसद)– विचार गोष्ठि, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर मनाउँछौँ
तीजको रमझम लागेको छैन । आफैँले पनि त्यसरी तडकभडक हुने गरी आयोजना गरेका छैनौँ । तीजको अवसरमा विचार गोष्ठि, अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर मनाइरहेका छौँ । महिला दिदीबहिनीले व्यापार मेला आयोजना गर्नुभएको छ । त्यहाँ सहभागिता जनाइरहेको छु । तीजको अवसरमा महिला सचेनाका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । तीजमा चेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यक छ । गरगहना, महंगा लुगा लगाएर तीजलाई भड्किलो बनाएर लगेका छन् । यसले गरिब र धनीबीचको खाडललाई गहिरो बनाएको छ । गरिबले तीज मनाउँनै नहुने हो की जस्तो बनेर गएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ । यता सुधारको क्रम पनि देखिन थालेको छ ।
शान्ता पौडेल (सांसद) – संगठनमा दिदीबहिनी र घरमा छोराछोरी भेला भएर मनाउँछौँ
महिला दिदीबहिनीहरुसँग मनाउने हो । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर मनाउने हो । संगठनका दिदीबहिनी भेला भएर मनाउँछौं । घरमा पनि छोराछोरी बोलाएर मनाउँछु । माइत जान अब बुढी भइसक्यो । यद्यपि, दाजुभाइले बोलाउछन् । समय भएको अवस्थामा जाने गरेको छु । आजकला त जान पनि फुर्सद हुँदैन । त्यसैले साथीभाइले बोलाएको ठाउँमा गएर मनाउने गरेको छु । नारीले मनाउने तीजलाई तडकभडक नगरी साधारण तरिकाले मनाउनु नै उपुक्त हुन्छ । हामी पनि विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सामान्य तरिकाले नै तीज मनाउँछौँ ।
बिन्दिया कार्की (सांसद)– ठूला होटलमा भन्दा सर्वाजनिक स्थानमा सामान्य तरिकाले मनाउनु उपयुक्त हुन्छ
तीजका कार्यक्रम क्षेत्र, नगर र वडास्तरमा आयोजना भइरहेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएर मनाइरहेका छौँ । त्यसका अलावा विभिन्न संघ संस्थाले पनि आयोजना गरेका छन् । ति कार्यक्रममा पनि सहभागी भइरहेको छु । महिला दिदीबहिनीहरुले वर्षमा एकपटक दुःख भुलेर खुशीको साथ मनाइ रहनुभएको छ । महिला दिदीबहिनीहरुले ठूला होटलमा भन्दा सार्वजनिक स्थानमा सामान्य तरिकाले मनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो कुरा गर्दा कतिपय दिदीबहिनीले पुरुषले दिनैपिच्छे होटलमा दर खाँदा हुने हामीले एक दिन गर्न नहुने भन्नु हुन्छ । धनी गरिब सबैको अपनत्व हुनेगरी तीज मनाउनु पर्छ । वर्षमा एकपटक आउने तीज धनि गरिब सबैले खुशीसाथ मनाउन पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
लीला सुब्बा (सांसद)– नारीको चाड, सबैले खुशीयालीले मनाउनु पर्छ
हाम्रो सांस्कृति पर्वको रूपमा रहेको तीजलाई मनाउनु पर्छ । हामीले आफ्नो संस्कृति बचाउन यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले तीजमा विकृति पनि थपिँदै गएको छ । महिना दिनदेखि होटलहरुमा महंगा गहना, लुगा लगाएर प्रदर्शनमुखी तरिकाले मनाउने गरिएको छ । यसरी तीज मनाउने क्षमता सबैको हुँदैन । यसरी तीज मनाउन नसक्नेहरुको मन बिग्रन्छ । जसले आफ्नो श्रीमानलाई यस्ता कुराका लागि दबाब दिन अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट घरकलहको अवस्था सृजना हुन सक्छ । त्यसैले हामीले तीजलाई साधारण किसिमले मनाउनुपर्छ । मैले पनि यसैगरी तीज मनाउँदै छु । खानापिन पनि सामान्य रूपको प्रयोग गर्नु पर्छ । नारीको संस्कृतिक चाडको हो यसलाई सबैले खुशीयालीको साथ मनाउनु पर्छ ।
सुनिता कुमारी चौधरी (सांसद)– शुभकामना आदान प्रदान गरेर मनाउने गरेको छु
नेपाली नारिको चाड हो । यस पर्वमा तडकभडकरहित तरिकाले मनाउनु पर्छ । यो पर्वलाई सामान्य तरिकाले मनाउनु पर्छ । यस अवसरका शुभकामना आदान–प्रदान गरेर मनाउने गरेको छु । वर्ष दिनमा एक पटक नारीहरुले मनाउने गर्नु हुन्छ । यस्तो अवसरमा सबैले खुसी साटेर मनाउने हो । नकी हाइफाइ देखाउने गरी गरगहना, महंगा लुगा लागाएर मनाउने । यसमा सबैले आफ्नो पर्वको रूपमा स्वीकार्ने गरी मनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सम्पन्न र विपन्नको बीचमा खाडल बन्ने गरी यसलाई विकास गरिनु हुन्न ।
साबित्री जोशी (सांसद)– माइत पनि जान्छु र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पुग्छु
तीजलाई झकिझकाउ गरेर मनाएका छैनौँ । यसलाई एउटा अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर महिलाहरुमा चेतना बढाउने तरिकाले मनाइरहेका छौँ । वर्षमा एक पटक आउने यो पर्व हामी सबैले मनाउनु पर्छ । देखावटी रूपमा नमनाएकै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । महिला दिदीबहिनीहरुमा के अभाव छ ? त्यसको विषयमा यो अवसरमा छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ । महिलाहरु कसरी अगाडी बढ्ने ? यो एउटा योजना बुन्ने अवसर पनि हो । एक पटकमा धेरै महिला दिदीबहिनी भेला हुने अवसरमा भएकोले विभिन्न योजना बनाउन सकिन्छ । यस अवसरमा प्रदेश १ का महिलाहरुका लागि के गर्न सकिन्छ भने र योजना पनि बनाउँदैछौँ । त्यसका लागि तीज एउटा अवसर हो ।
उषाकला राई (सांसद)– कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन भ्याइ–नभ्याइ हुन्छ
तीज आउनु अघिदेखि नै विभिन्नि कार्यक्रममा सहभागी हुने गर्छु । विराटनगर, उदयपुर र खोटाङका कार्यक्रममा पनि सहभागी भएँ । तीजको दिन म काठमाडौँमा हुन्छु र विभिन्न कार्यक्रममा प्रगतिशील ढंगले सहभागी हुन्छु । म तीजलाई महिलाको अधिकार बंशसँग जोड्ने अभियानका लागि उपयोग गर्छु । तीजमा मलाई विभिन्न स्थानका कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याइ–नभ्याइ हुन्छ ।
गुलेफन मियाँ (सांसद)– कार्यक्रममा सहभागी भएर शुभकामना दिन्छु
मुस्लिम समुदायको भएकोले घरमा तीज मनाउँदिन । तर, महिला दिदीबहिनीहरुले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर शुभकामना दिएर मनाउँछु ।
कृष्णकुमारी राई (सांसद)– निम्तोअनुसारको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु
म मोरङको पथरी बजारमा बस्छु । कार्यक्रमहरुमा निम्तो आयो भने सहभागी हुन्छु । नत्र घरमा आफ्नै पाराले मनाउँछु ।
कुसुमकुमारी श्रेष्ठ (सांसद)– घरमा तीज मनाउँदिन तर समाजमा सहभागी हुन्छु
म नेवार समुदायको भएकोले घरमा तीज मनाउँदिन । तर, विभिन्न स्थानमा आयोजना भएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर मनाउँछु । शुभकामना दिँदा तीजलाई महंगो र तडकभडक बनाउनु हुँदैन भनेर भन्छु ।
सौभाग्यवती राई (सांसद)– पहिले मनाउँथे, आजकाल छाडिदिएँ
पहिले तीजलाई महिला दिदीबहिनीको व्यथाकथा सुनाउने पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो । म पनि सहभागी हुन्थेँ । तर, आजकल तरिका फेरिएको छ । नाचगान र तामझाम बढी हुन्छ । यसैले मैले पनि सहभागी हुन छाडिदिएँ । कार्यक्रमहरुमा चाँही शुभकामना दिन सहभागी हुन्छु । म तीजलाई ढर्रा र अन्धविश्वासबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्छु ।